PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2019-01-06 - Izikole zasemakhaya zibukise ngezasedolobheni ku-matric
Izikole zasemakhaya zibukise ngezasedolobheni ku-matric
Isolezwe ngeSonto - 2019-01-06 - IZINDABA - MHLENGI SHANGASE
PHEZU kokuba ezinye zezikole ezisemakhaya ezingo-Quintile 1 KwaZulu-Natal zibhekene nengwadla yokushoda kwezidingo kodwa ziphase ngamalengiso zahlula lezo okukhokhwa kuzona ezinazo zonke izidingo.
Lokhu kufakazelwe nayisikhalo sikaNgqongqoshe wezeMfundo esifundazweni uMnuz Mthandeni Dlungwane ngezifunda ezisemadolobheni ezihlulwe yizifunda ezisemakhaya ngokuphasa.
UDlungwane ukhale ngesifunda uMlaza, esinezikole ezisedolobheni iTheku nezinye ezisemakolishini nePinetown enezikole okwakungezamhlophe ezihlulwe yizifunda Amajuba, uMkhanyakude esemakhaya kanjalo noGu.
Izikole ezisezifundeni ezisemadolobheni, uthe zinazo zonke izinsiza okubalwa ama-laboratory, imitapo yolwazi nezinye izidingo uma uqhathanisa nezikole ezisezifundeni ezisemakhaya.
“Sikhathazekile ngezifunda uMlaza nePinetown kanjalo noMgungundlovu owehle ngo-4% emiphumelweni ka-matric.
“Sizozeseka lezi zifunda ngoba uma kungase kunyuke zona imiphumela yethu inganyuka kakhulu.
“Kumele ngixoxe noMqondisi waseMgungundlovu ngoba ilapho kukhona nekhaya lami, akukwazi ukuthi imiphumela ingehla lapho ngiqhamuka khona,” kusho uDlungwane.
Amajuba alale indawo yokuqala esifundazweni, alandelwe uGu, kube uMkhanyakude.
UDlungwane uthe izikole ezingo-Quintile 1 ziphase ngo-71%.
“Ukwenza kahle kwalezi zikole kusho khona ukuthi sibambe ngakho, sisendleleni efanele. Sizoqhubeka siqinise kulezi zikole,” ksho uDlungwane.
UMgungundlovu ulale isine kwalandela iPinetown kwathi uMlaza walala endaweni yesikhombisa. Isifunda esisemsileni yiLembe esibe ngunombolo 12.
Okushayelwe ihlombe ngesikhathi kumenyezelwa imiphumela ngoLwesihlanu eThekwini, ngukuthi asikho isifunda esithole ngaphansi kuka-70% esifundazweni.
Ibamba likaNdunankulu wesifundazwe uMnuz Sihle Zikalala, uthe izifunda ezisemadolobheni azigawule zibheke ngoba ezisemakhaya ziyangenisa.
“Aziqaphele izifunda ezifana noMlazi nePinetown ngoba uMkhanyakude usukhanya eduzane awusakhanyi kude. Lezi zifunda ezisemakhaya zihlule izifunda ezisemadolobheni.”
UDlungwane ubuye wakhala ngokubiza kwemali yokufunda wathi bakhathazekile ngalokhu.
“Sekubiza kakhulu kwezinye izikole okuyinto esikhathazayo. Asisazi isizathu esenza imali inyuke kanje. Akumele imfundo kube eyabambalwa kuvinjelwe abanye abafuna ukufunda kodwa abangakwazi ngoba bengenawo imali,” kusho uDlungwane.
Izinga lokuphasa kulesi sifundazwe linyuke lafinyelela ku-76.2% kuzwelonke libe ngu-78.2%.
UNgqongqoshe wemfundo eyisisekelo uNkk Angie Motshekga, uncome izikole ezisemakhaya, emadolobheni nasemapulazini ukuthi zenze kahle.
Isifundazwe iGauteng yisona esizishaye zonke emakhanda kuleli ngokuthola u-87.9%.
UNkk Motshekga uthe bangu-84 700 abafundi abebefunda ezikoleni zasemakhaya abaphase ngamaBachelor kwathi abangu-76 599 abaphase ngamaBachelor bebefunda ezikoleni okukhokhwa kuzona imali.
Asikho isifunda kuleli esithole ngaphansi kuka50%.
“Kuyangijabulisa ukuthi abafundi abangu-241 340 abaphase u-matric bebefunda ezikoleni okungakhokhwa kuzona. Ngiyajabula ukuthi abangu-91 400 baphase ngamaDiploma bebefunda ezikoleni okungakhokhwa kuzona.”
Lesi sifundazwe silale isithupha kuzwelonke. Zenze kanje izifundazwe: 1.Gauteng:87.9%.
2. Free State:87.5% 3. Western Cape:81.5% 4. North West:81.1% 5. Mpumalanga:79% 6. KZN:76.2%
7. Northern Cape:73.3% 8. Eastern Cape:70.6% 9. Limpopo:69.4%.
BADELA ubusuku abafundi ababelinde imiphumela yabo yakwa-matric bayothenga amaphepha ukuze bazibone ukuthi benze kanjani. Izinga lokuphasa linyukile kuzwelonke nasezifundazweni Isithombe:Simphiwe Mbokazi African News Agency (ANA).